Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana i Thomas Jefferson | Naveen Patnaik - Fikarohana momba ny vatana teraka
Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanontany an'i Ahtun Re aho, mpitari-dalana nentim-paharazana nampitain'i Kevin izay nampiseho fahaiza-manao mba hahalavorary ny fiainam-piainana taloha, momba ny fampodiana amin'izao fotoana izao Thomas Jefferson. Ahtun Re nilaza tamiko fa i Jefferson dia teraka indray ao amin'ny maha-mpanao politika malaza any India azy ao amin'ny Antenimieram-pirenen'io firenena io, ny Rajya Sabha, izay heverina ho kandidà ho an'ny praiminisitra.
Taorian'ny fikarohana sasantsasany dia nanamafy i Ahtun Re fa efa niorina indray i Jefferson Naveen Patnaik. Ankoatra ny fitoviana ara-batana dia misy fitoviana eo amin'ny toetra. Ampitahao ny sary amin'ny alàlan'ny fametrahanao ny cursor eo aminy.
Thomas Jefferson & Naveen Patnaik: Lamin'ny famoronana antoko politika vaovao
Thomas Jefferson dia namako John Adams ary nanompo tao amin'ny cabinet de George Washington. Adams sy Washington dia mpitarika ny Antoko Federaly, izay nanohana governemanta matanjaka. Niaraka tamin'ny sakaizany James Madison dia namorona antoko mpanohitra mangingina i Jefferson ary avy eo nametra-pialana tamin'ny kabinetran'i Washington. Hifanandrina amin'i John Adams, izay lefitry ny filoha lefitra ao Washington izy, taorian'ny nanambaran'i Washington fa tsy hitady fotoana fahatelo amin'ny maha filoham-pirenena amerikana azy. Resin'i Jefferson tamin'ny fifidianana i John Adams, izay lasa filoham-pirenena amerikanina faharoa.
Jefferson dia nanohitra an'i Adams tamin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka. Tsy mitombina izany, Jefferson dia niampanga an'i Washington sy Adams ho nanandrana nanangana mpanjaka hafa, toa ilay tany Britanika fa nanampy tamin'ny fanonganana i Adams sy Washington. Nirehareha i Jefferson fa nandresy ny Adams nampiditra azy ary niantso ny fandreseny hoe "Revolution of 1800." Milamina kokoa ny milaza fa nahatsapa ho namadika an'i Jefferson i Washington sy Adams.
Toy izany koa, Naveen Patnaik dia namorona antoko politika vaovao tao India, ny Biju Janata Dal (BJD). Izy koa dia niahiahy momba ny kolikoly amin'ny antoko politika, sahala amin'i Jefferson izay niahiahy fa ny Federalista, anisan'izany i Adams sy Washington, dia manangana mpanjaka vaovao. Ho an'ny anjarany amin'ny famongorana ny kolikoly, ao anatin'izany ny antokony, Patnaik dia nahazo ny anarana hoe "Mr. Madio. "
Thomas Jefferson & Naveen Patnaik: Lamin'ny fialana lavitra amin'ireo mpiara-dia taloha
Ny fitoviana iray hafa dia ny làlam-panavotana avy amin'ireo mpiara-dia taloha, indrindra fa ireo mpikambana ao amin'ny antoko politika indianina hafa, ny Bharatiya Janata Antoko (BJP). Ity teny manaraka ity dia avy amin'ny Wikipedia:
"Ny BJD dia nanana fiaraha-miasa tamin'ny BJP tany Odisha ary nanohana ny NDA tao afovoany ihany koa hatramin'ny 1998 ka hatramin'ny 2009 rehefa nanapa-kevitra Andriamatoa Naveen Patnaik handrava ny fiaraha-miasa ary handeha irery amin'ny fifidianana ankapobeny 2009. Na izany aza, ny BJP dia nanondro ny famadihana an'i Naveen Patnaik. ” (1)
Ao amin'ireto ohatra ireto, dia misy ny lamin'ny fanapahana ny mpiara-dia taloha miaraka amin'ny fahatsapana ny famadihana.
Thomas Jefferson sy Naveen Patnaik: Maherifo politika malaza
Ny fitoviana hafa amin'i Jefferson sy Naveen Patnaik dia ny fahombiazan'ny laza malaza. Noho ny lazainy ho mpanoratra lehibe indrindra ao amin'ny Declaration of Independence, Jefferson dia iray amin'ireo mpanao politika malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Toy izany koa, i Naveen Patnaik dia heverina ho iray amin'ireo mpanao politika malaza indrindra any India.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana hita amin'ny firafitry ny taolana tarehin'i Thomas Jefferson sy Naveen Patnaik. Heveriko fa ny fisehoana ara-batana dia voafaritra amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny maodelin'ny angovo sy ny lova ara-nofo, izay mety hiafara amin'ny fiovan'ny endrika iray avy amin'ny fahatongavan'ny nofo iray hafa.
Ny fiainana taloha talenta: Samy naneho ny fahaiza-manaon'ny politika i Jefferson sy Patnaik ary nahalaza be ny lazany.
Fiovana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-monina: Teraka tao amin'ny zanatanin'i Angletera Amerikana i Jefferson ary kristianina. Teraka tany India i Naveen Patnaik ary avy amin'ny finoana Hindu.
Tranga mifandraika: Syed Ahmad Khan | Narenda Modi